ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ Bump ကျော်ရရန်အားမည်သို့
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 18 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်း၏အသုံးအများဆုံးအထင်အမြင်လွဲမှားလူနေဆဲအန္တရာယ်များတဲ့လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ကရိပ်မိသောအချက်ဖြစ်ပါသည်. အကြိမ်မည်မျှကောင်းစွာအနက်အဓိပ္ပာယ်ပါပြီ (မကြာခဏပျော်ရွှင်စွာပူးတွဲပါ) သင်ရုံပေါ်တက်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့အွန်လိုင်းအောင်သွယ်ပွဲစားဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ပတ်သက်. ပြောတဲ့အခါမိတ်ဆွေတွေကိုထိတ်တလန် gasped? "အဘယ်သို့နည်းသင် dodgy ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်လျှင်?", "မှာရှိသမျှဘေးကင်းလုံခြုံ Is?"နှင့်" အားလုံးသင့်ရဲ့ private information ကိုကြည့်ရှုခြင်းငှါကမ္ဘာမှာလူတိုင်းရရှိနိုင်လိမ့်မည်!"သူတို့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဟာသွားလာရင်းပေးစေခြင်းငှါဝိုင်းသောသူတို့ကြေညာရာတွင်တစ်ပုံမှန်အားဖြင့်လက်ခံကျော်ကြားမေးခွန်းတွေနဲ့မှတ်ချက်တွေဖြစ်ကြောင်း. အွန်လိုင်းကနေချိန်းတွေ့ဖို့မည်မျှပင်ရှုပ်ထွေးများပြားအန္တရာယ်တွေရှိတယ်မှန်ပေ၏နေစဉ်, အဲဒါကိုထက် ပို. အန္တရာယ်များသောဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြောသည့် untruth ဖြစ်မည်ဟု, ပြော, တစ်ဦး bar ကနေသူတစ်ဦးဦးကိုတက်ကောက်နေ. တကယ်တော့, မကြာသေးမီစာရင်းဇယားအတွက်ကြောင်းပြသ 2013, 17% အစပိုင်းတွင်အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်ဇနီးမောင်နှံများအတွက်၏.
သိသိသာသာ, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လူမျိုး၏အချို့အမျိုးအစားများအတွက်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပုံသေနည်းဖြစ်. ဤဆိုဒ်များတွင်အောင်မြင်မှုကိုတွေ့ကြပြီသူများသည်ယခင်ကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အရည်အချင်းပြည့်မီမိတ်ဖက်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းဖြစ်ရပြီ. အခြားအရာအားလုံးလိုပဲ, သော်လည်း, ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့သိသာထင်ရှားသောအခြားမြေယာဖို့ failsafe နည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး. သို့သော်, သင်ပျော်ရွှင်သင့်ရှာဖွေမှုအများဆုံးနည်းလမ်းကုန်ကြပါပြီလျှင်, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည့်အခြားကဲ့သို့ကောင်းတစ်ခု option ဖြစ်တယ်. ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အသုံးပြုသူများအနည်းငယ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏ကျယ်ပြန့်လွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ. ပထမဦးစွာပယ်, လွန်းပါးလွှာစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန့်ပွားခြင်းမရှိပွိုင့်ရှိပါတယ်. သေချာတာပေါ့, တကရုပ်ပုံသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုတက်တင်လိုက်တယ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်, အကောင်းဆုံးသင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတခုအဖြစ်အနည်းငယ်လိုင်းများကိုရေးသားခြင်း, အကောင်းဆုံး Enter ခေါက်ပါနဲ့ဆန္ဒရှိ. သို့သော်ငြားလည်း, ကအနည်းငယ်သုတေသနပြုဖို့ပိုကောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ရရှိနိုင်ကြောင်းကိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ sites များ၏မတူညီသောအမျိုးအစားများအကြောင်းကိုပိုမိုထွက်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာလည်းပထဝီအနေအထားအရနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းဖောက်သည်ရှိသည်သောဆိုဒ်များနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်ကောင်းတဲ့အိုင်ဒီယာပါလိမ့်မယ်.
ကွဲပြားခြားနားသောဆိုဒ်များပေါ်တွင်တက်လက်မှတ်ထိုးသည့်အခါ, ဒဏ်ငွေပုံနှိပ်ဖတ်ရှုဖို့မမေ့မလြော့ပါ. ဟုတ်ကဲ့, အဲဒီကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကိုတစ်ဟုန်ထိုးအောင်မြင်မှုနှုန်းနှင့်အတူအကြီးအကျယ်လူကြိုက်များ. ဆဲ, ကလစဉ်အသင်းဝင်ကြေးပေးသွင်းရန်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်. ပြန်လည်စူးစမ်းရှာဖွေရန်နှိပ်စက်တာဘယ်တော့မှမ. အခြားသူများကိုအောင်မြင်တဲ့ပွဲစဉ် ups များအတွက်အပိုက​​ုန်ကျစရိတ်များရှိစေခြင်းငှါနေစဉ်တချို့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာသင်ကျယ်ပြန့်အဖွဲ့ဝင် profiles များအားလုံးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်အဘို့အမိန့်တွင်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေများကိုအားသွင်းဖို့လူသိများလျက်ရှိ. အမြဲတမ်းအဒီစာမျက်နှာတွေကိုသင်ဝန်ဆောင်မှုထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြောင်းမှတ်မိနေ. ဒါဟာကျိန်းသေကောင်းတစ်ဝန်ဆောင်မှုပေမယ်သင်တကယ်ရှိသည်ထက်ပိုမိုပေးဆောင်ခြင်းဖမ်းမိခံရဖို့မလိုလားဘူး. ဗုံးကုန်ကျမထားတဲ့ကိုသင်ရရှိနိုင်သောအများအပြား့လျောက်ပတ်သောဆိုဒ်များရှိပါတယ်.
ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များမှတဆင့်သူတို့ရဲ့သိသာအခြားသူများကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းခဲ့ကြသူအများစုမှာလူသာအားထုတ်မှုနဲ့သည်းခံခြင်းအားဖြင့်ထိုအတူ ပြု.. ဒီတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူတက် hooking တစ် failsafe နည်းလမ်းမရှိလှကြောင်းကိုသတိရပါ. ကိုယ့်အသက်တာမှာတူ, အလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်အစည်းအဝေးအချိန်၏ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း, ကံနှင့်မဆုတ်မနစ်. ဒီအတိုင်းတော့, သင်သည်ဤချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုများအတွက်တက်လက်မှတ်ထိုးသင်ပထမဦးဆုံးလတစ်လပြီးနောက်နေ့စွဲမြေယာရန်ပျက်ကွက်လျှင်အလွန်အမင်းစိတ်ပျက်မခံစားရဘူး. ရောမမြို့နေ့ရက်ကာလ၌တည်ဆောက်မတို့၏ဆက်ဆံရေးလိမ့်မည်မခံခဲ့ရ. တခြားလူတွေရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမှတဆင့်သာသွားသင်ဖို့အမြင့်ဆုံးအယူခံခံစားတော်မူသောသူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့အချိန်ကိုယူပါ. အဘယ်အရာကိုမျှဖြစ်သွားနိုင်ပေမယ့်အရမ်းအနည်းဆုံးသင်ကိုပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းလုပ်ထားပါတယ်သိ.
သင်အွန်လိုင်းသင်ကြိုက်သူတစ်ဦးဦး "ခရီးဦးကြိုပြုခြင်း" အခွင့်အလမ်းရှိတယ်, ပြီးတော့အောင်မြင်စွာနေ့စွဲလုံခြုံပါဘူးဆိုရင်, ဒီတွေ့ဆုံမှုအပေါ်အလွန်အကျွံဖိအားများမထားကြဘူး. ရှိသမျှသည်အခြားသောပထမဦးဆုံးရက်စွဲများလိုပဲ, ဒီဖြစ်ကောင်းထွန်ဆုံတွေ့ဖြစ်လိမ့်မည်. ဆဲ, နောက်ကျောကိုသင်အတိတ်အတွက်ခဲ့တယ်ရှိသမျှတို့သည်အရက်စွဲများထင်. အကယ်စင်စစ်သင့်အကြိုက်ဆုံးသူများသင်သည်ဆင်းသင့်ဆံပင်စေနှင့်နိမ့်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်မွေ့ရန်တတ်နိုင်ဘယ်မှာရှိသူများဖြစ်ကြသည်. လက်မကိုတစ်ဦးကယေဘုယျစည်းမျဉ်းမိသားစုဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေအဖြစ်ကောင်းစွာသင့်အစည်းအဝေး၏အချိန်နှင့်နေရာအရပ်ကိုသိစေပါလိမ့်မယ်. အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင့်ရက်စွဲအန္တရာယ်များသောဘာမှဦးတည်သွားစေမှာမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်သူကအမြဲတမ်းဘေးကင်းလုံခြုံကစားရန်ငွေပေးချေ.
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ sites များ၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သုံးစွဲသူများအလွန်ကောင်းစွာကကြောက်စရာအတွေ့အကြုံကိုရှာတွေ့စေခြင်းငှါ,. ဒါကြောင့်ကြည့်ဖို့တစ်ခုမှာအပြုသဘောနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ရိုးရှင်းစွာခေတ်သစ်ကမ္ဘာအထိရောက်မှုအရှိဆုံးနှင့်အသုံးဝင်သောချိန်းတွေ့ကိရိယာတွေထဲကယ်လိမ့်မည်. ထို site အဖွဲ့ဝင်အများစုကကိုယ့်ကိုကိုယ်ကဲ့သို့တူညီသောရည်ရွယ်ချက်မှာတက်သည်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်းသတိရပါ: မေတ္တာသည်ကြည့်ရှုရန်. ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအပခုံးလျှော့ပေးရေး, က profile ကိုချရေးဖို့နှင့်သင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခရီးစတင်!